Umahluko CO2 laser yokumakisha kunye nomatshini ifayibha laser yokumakisha
1. Ii-lasers ezahlukeneyo: i-CO2 laser isetyenziselwa umatshini wokumakisha we-carbon dioxide laser, kunye ne-fiber laser isetyenziselwa umatshini wokumakisha we-fiber laser. Ubungakanani be-laser ye-carbon dioxide yi-10.64μm, kwaye ubude be-laser yefayibha ngu-1064nm. I-fiber lasers ixhomekeke kwimicu ye-optical ukuqhuba ii-lasers, ngelixa i-CO ...
Ukusetyenziswa kunye nezibonelelo zomatshini we-4 axis cnc router
Olona hlobo lusisiseko lomatshini wokukrola we-CNC inee-axis ezintathu, ezinokuhamba kwaye zisike ecaleni kwe-axis nganye ngaxeshanye. I-axis ze-3 ze-axis ze-CNC ziqheleke kakhulu kwaye zihlala zisetyenziselwa ukusika amacwecwe acaba-mbini. Umatshini we-4-axis Wood CNC unazo zonke ii-axes ezifanayo zomatshini we-3-axis wokugaya, kunye ne ...
Loluphi uhlobo lweemoto ezijikelezayo olithandayo? Amanzi apholileyo okanye umoya opholileyo
ngomphathi ku 21-09-28
I-motor yokuluka yinto ephambili kuwo nawuphi na umatshini we-CNC. Umsebenzisi uyisebenzisela ukwenza ukomba okukhawulezayo, ukukrola, ukusika kunye neminye imisebenzi enjalo, kwaye isetyenziswa kakhulu kuluhlu olubanzi lwamashishini. Intonga yokuluka elungileyo inokuqinisekisa ukusebenza kakuhle komatshini we-cnc kunye ne-proces ...
Izinto eziluncedo zeGantry Plasma Cutting Machine
Iimpawu zomatshini wokusika wePlasma: 1. Umatshini wokusika onzima osebenzayo usebenzisa isakhelo esinzima, isikhokelo esinzima somgaqo kaloliwe, uzinzo olulungileyo, ubukhulu obukhulu, isilinganisi sinobubanzi beemitha ezi-4, iimitha ezi-5, kunye neemitha ezi-6, kunye ubude bunokuba ukusuka kwi-8 yeemitha ukuya kwishumi seemitha. 2. Iyakwazi ukubona idangatye eliphindwe kabini ...
Izinto eziluncedo ze CNC ngomatshini wokusika
ngomphathi ku 21-09-27
Ukusebenza ngokuchanekileyo kunye nokuchaneka xa kuthelekiswa nezixhobo zemanyuwali, ukusebenza ngokukuko kunye nokuchaneka zezona zinto ziluncedo kakhulu kwimishini yokusika ye-CNC. Umsebenzi ophethwe ngesandla unokukunika unxibelelwano olusondeleyo kunye nezinto oza kuzisika, kodwa inqanaba lokunyamezelana kwephutha liphezulu kakhulu. Nditsho nabasebenzi abanesakhono ...
Inzuzo umatshini ifayibha laser ukusika
ngomphathi ku 21-09-23
Metal ifayibha laser ukusika umatshini lisetyenziswa kakhulu kwimizi-mveliso kunye nemveliso. Kwinkqubo yokusebenzisa, ayinako nje ukuhlangabezana neemfuno zemveliso ephezulu, kodwa ikwafezekisa imigangatho yokusika ephezulu, ethandwa kakhulu phakathi kwabasebenzisi. 1. Ngenxa yokungasebenzi koqhagamshelo ...
Inzuzo kumatshini wokumakisha we-laser
ngomphathi ku 21-09-18
Itekhnoloji yokumakisha yeLaser ingene kuzo zonke iinkalo zobomi. Ukusetyenziswa koomatshini bokumakisha i-laser akukho zinto zisetyenziswayo, akukho kungcoliseka kwendalo, kunye nokusebenza ngokukuko okuphezulu. Kubomi bethu bemihla ngemihla, ukupakishwa kokutya yeyona nto ixhaphakileyo enolwazi olufana nomhla wemveliso eprintiweyo kuwo. ...
Igesi Auxiliary ukuba ifayibha laser ukusika umatshini
Ngophuhliso olukhawulezileyo loqoqosho lwehlabathi, iimfuno zesantya, umgangatho kunye neendleko zokulungiswa kwezinto zentsimbi ziye zanda, kwaye ubunzima benkqubo sele buphezulu kwaye buphezulu. Amanye amalungu afikelele kwiinkqubo ezininzi, ezifuna ukuchaneka kwephepha elidibeneyo.
Uyikhetha njani i-edge bander？
Abasebenzisi abaqhelene noomatshini bebhanti ebukhali bayazi ukuba bahlulwe baba ngoomatshini bebhendi boomatshini abazenzekelayo kunye noomatshini abazenzekelayo. Kodwa abanye abathengi abazi ukuba bakhethe njani xa bethenga i-edge banders. Ngapha koko, baneempawu zabo, ikakhulu ukubona ukuba yeyiphi enye ...
BASETYENZISELWA NTONI OOMATSHINI BOKUBumba IMETA?
I-CNC umatshini wensimbi yesinyithi luhlobo lwekhompyuter yesixhobo somatshini esilawulwayo sokukrola kwesinyithi kunye nokugaya. Ngokwesiseko somatshini wokukrola wentsimbi we-CNC, amandla okuluka kunye ne-servo motor inyukile, kwaye umzimba womatshini unokumelana nomkhosi, ngelixa ugcina i-hi ...
15000W amandla ifayibha laser ukusika umatshini
Ekubeni ifayibha laser ukusika umatshini waqhekeza endle ukusika mveliso, iye rhoqo ahlaziye inkcazo entsha laser ukusika; kunye nemithetho emitsha yokusika okubonakalayo, itshintshile ulwalathiso lophuhliso lwetekhnoloji yokusika i-laser yehlabathi. Ihlala idlala ...
Izibonelelo zomatshini wethu wokusika iplasma
1.Senza lo mgca iminyaka emininzi, sinamava atyebileyo kunye nolwazi lobungcali, siya kukuvumela ukuba ufumane owona mshini wokusika weplasma ufanelekileyo kunye noqwalaselo olufanelekileyo. Obu buchule bunokukuvumela ukuba uphephe iimpazamo ezininzi kwaye uphephe inkathazo ethile. Omnye umzi-mveliso uhlala uswele la mava, kwaye uzise ...